Inquest of wisdom and compassion: A bitter taste of age
A bitter taste of age
This dissonant age
leaves us zero, for our dignity is gone;
devils are dancing on the throne
The dead last of the new millennium planet
now is our country,
whatanasty age to be
They regale us with shameless jokes
Pigmen never pause in shooting fusillades
We, like the slaves are indentured to listen
for they have in holsters, their guns
Now is sticky with blood slime
This is oncearoad where the fighting peacocks ran
Whatabad age so sickened
Yearling are born;
for the tiger beasts
they are alwaysafeast
this is the age star bucks fade away
My entire house is falling
with such wicked conflagration;
need to inure myself
how I can be winking
that this dilapidation has never been seen
Likeafaint-hearted turtle small
my little stealthy head is
hiding inside the ego shell,
Why I am so cowering to those rumbling knells
we find ourselves drowning
in the river of deprivation and starvation;
this is the age of Burma
(Original writer: Kaung Kin Ko)
Posted by Burmakin at 7:05 PM
Labels: Likeadiamond saw in lapidary, this is Shin Silavon
So why not these fawns wait,until they mature,sharpening their horns,concert together to fight back the tigers.
It is more honorable to die rather than passively listening to those shameless jokes.Carry On!The blood of fawns and peacocks have not been dry yet.
I like to kick you said...
I took one and half hours or so for reading your poem so beautiful vocabularies.
I was angrier and angrier at you for I exhaust finding such "stupid" words in dictionary.But it is very nice to know such English.
Joke is quiteapositive word havingasense of merriment.You should use "farce" that hasanegative sense,remember "Phatalone Gaung Kya" in jeering at the unfair paradoxes of the world
No grace to see lizards with Buddha.
I saw some writing against in blog for your comment on YTP.I don't support them but his example is quite beautiful.I post you that is why.
YTP's one country two higher education systems:
1. From 1st Grade to 11th - Myanmar education system standard under Ministry of Education
2. Myanmar Higher Education System - (after passing 11th Grade or particular exam only) to Myanmar Universities and Colleges
3. Int'l Higher Education System - (after passing 11th Grade and GCE or IELTS or TOFEL or SAT or Entrance exam) to Int'l Universities or Colleges in Myanmar
YTP ရဲ့ တနိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ပညာေ၇းစနစ် နှစ်မျိုး ဆိုတာ ကို ထောက်ခံပါတယ်။ အချိန် စောင့်စရာလဲ မလိုဘူး။ ကူညီမည့် အလှူ ၇ှင်၇ှာ ဖို့ပဲလိုတယ်။ (အလှူ၇ှင်ပါ။ Knowledge Business လုပ်မည့်သူမျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါ။) အဆင့်မြင့် ပညာေ၇း အကူအညီပေးဖို့ ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်။ လူငယ်တွေ အကျိုးအတွက်ပါ။ kojewေ၇ာ ဘယ်လိုသဘော၇လဲ။ လမ်း၇ိုးဟောင်းကို ဆင့်ကာထွင်တှဲ့ဗျ။
နိုင်ငံေ၇းနဲ့ မနွယ်တဲ့ ပညာေ၇း၊ Training သက်သက် ဆို အားလုံး လက်ခံကြမှာပါ။ အမေ၇ိကန် စင်တာက ဂျာနယ်လစ်သင်တန်းတုိ့၊ လူ့အခွင့်အေ၇း/နိုင်ငံေ၇း သင်တန်းတို့တော့ မလုပ်နဲ့ လေ။ ကွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ နိုင်ငံခြား ထွက်သင်နေရတဲ့ ထမင်းစားလက်မှတ်၇ သင်တန်းတွေက စရမှာပေါ့။ Burmakin ပြောသလို Harvard University ကိုလည်းေ၇ွှ့စ၇ာမလိုပါ။ Quantum Mechanics ကိုလေ့လာဖို့ အတွက် Particle Accelerator လဲမလိုသေးပါဘူး။ လူ့အ၇င်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးေ၇း သင်တန်းတွေနဲ့ စနိုင်၇င် ၇ပါပြီ။ မြန်မာလူငယ်တွေအကျိုးလုပ်တာပါ။ (Burmakin ပြောတဲ့) လမ်းဘေးကွမ်း ယာသယ်လို ဈေးကွက်/အမြတ်၇ှာ စ၇ာမလိုပါ။ မြန်မာလူငယ်တွေ အကျိုးအတွက် အ၇ှုံးခံလုပ်၇မှာပါ။
RIT(YIT) တခုလုံးကို ဆိုဗီယက်က ဆောက်ပြီးလှူခဲ့ သလို မြန်မာမှာ ငွေေ၇ာ၊ နည်းပညာေ၇ာ လှူမည့် အလှူ ၇ှင်လိုနေတာပါ။ RIT ဟာ အေ၇ှ့တောင်အာ၇ှမှာ ထိပ်တန်းေ၇ာက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒီလို Institute မျိုးလှုကြ၇င်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရလုပ်ကိုင် ဆောင်၇ွက်မှု အားနည်းနေတဲ့ အပိုင်း ( ကို Ottara ပြောသလို GTC ) တွေ မှာ ၀ိုင်းဝန်းကူ ညီလည်း၇ပါတယ်။ သီးသန့် လုပ်ချင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက က ဘာစနစ်၇ှိမှ ၊ ဘယ်လို အခြေအနေ ပြောင်းမှ ၊ အမြတ်၇မှ လုပ်မယ်ဆို ပြီး လူငယ်တွေ အကျိုး ကို သူများလက်ညှိုးထိုးပြီး လွှဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ လူငယ်တွေ ကံပေါ့။
လုပ်နိုင် ကူညီနိုင် သမျှ အမြတ် လို့ ယူဆ၇င်တော့ အခု လက်၇ှိ အခြေအနေမှာ ကို မြန်မာလူငယ်တွေ ကို ကူညီ နိုင်ပါကြောင်း ပြောပါ၇စေ ခင်ဗျား။
ပုံပြင်လေးတပုံ။ လူတယောက်က ကမ်းစပ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ငါးလေးတွေ ကို ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချနေတုန်း လူစိမ်းတယောက်ေ၇ာက်လာပြီး ဒီလိုငါးတွေက ကမ်းစပ်မှာ ထောင်သောင်းချီပြီး ၇ှိနေတာ၊ ခင်ဗျားလုပ်နေလဲ အပိုပဲ အကျိုးမထူးပါဘူး လို့ပြောလာပါတယ်။ ကြယ်ငါးလေးတကောင်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချ၇င်း တုံ့ပြန်လိုက်ပုံက "ဒီတကောင်အတွက်တော့ ထူးတယ်ဗျ" ပါတဲ့။ ပညာ၇ှာ၇ခက်နေတဲ့ မြန်မာလူငယ်လေး တယောက်လောက်အတွက်လည်း ထူးအောင် လုပ်ကြပါစို့ ကိုOttara၊ ကိုဂျုး ၊ ကိုကဒေါင်း၊ Burmakin နဲ့ တက်ကြွလှုပ်၇ှားသူများခင်ဗျား …
မှတ်ချက် ။ မနေနိုင်လို့ဘေးက၀င်ပြောတဲ့ Fair&Square သည် American Society of Mechnical Engineering အသင်းဝင် မြန်မာလူငယ် အင်ဂျင်နီယာ တယောက် ဖြစ်ပါကြောင်း kojew, burmakin နဲ့ ကိုကဒေါင်းတို့ ရေ ။ ကြော်ငြာဝင်တာမဟုတ်ပါ၊ ဘယ်အဖွဲ့ကဆို ပြီး တံဆိပ်ကပ်ခံ ရမှာ စိုးလို့ ပါခင်ဗျာ
The web link of this comment is on
Yes,this isabeautiful example. Unfortunately,this is for the direction of Burmakin's argument and not for the direction of F & S.
Referring his example,there are two ways to help the fish for their survival:(1)put the fish into the sea or (2)bring the sea into the fishes.I believe he is speaking about no.(1).
If you are the god to help the fish and you have the above two ways to choose, which way you will choose? Putting fishes into the sea or moving the sea to land for fishes.
Even the most irrational human being on earth will not choose No.2, because there is no time and no resource to move the sea into the dry land for fish's sustenance.If you think yourself you areagod to be able to create according to your whim, you will probably choose No.2 to put the sea on land so that the nature will be completely reverse,"water flows from the lower place to the upper place".
Sea and rivers exist not because people create them. But because this is the principle of nature for them to exist there.This is the nature ofariver to be flowing from the mountain toavalley, not to be flowing from the ground to the sky.Ifariver has the ability to flow into the sky,no land animal is able to survive today.
Markets exist because people and god are rational.This is called the market intelligence that made the people's decision for their investment.God doesn't need to create the markets but markets arise spontaneously where the need and incentives exist.That is why,the real rational youths leave Burma where there is no landscape for their capacity and intelligence.
But people who think themselves as God are thinking about moving the sea to land for survival of fishes who has already tried in their own way to jump into the sea. I am also not sure whether or not these god-to-bes, who sounds very sincere to the self-restrained youths in Burma, had ever helpedayouth or so(a fish or two) to be able to go into the market before they thought about moving the market(the sea) into Burma(the land).
The choice of Burmese
I am here because I haveapurpose